एक भारतीयको समाचार ब्लग - THE INDIAN FACE
तपाईंसँग सनग्लास छ? The Indian Face र तपाईलाई थाहा छैन कि कसरी तिनीहरूको उत्तम अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न भण्डार गर्ने? चिन्ता नगर! यस लेखमा हामी तपाईलाई5सम्भावित समाधानहरू दिन जाँदैछौं ताकि तपाईले घरेलु तरीकाले तिनीहरूलाई भण्डारण गर्ने केही समर्थनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यी उपयोगी सुझावहरू हुन् जुन तपाईंको लागि प्रभावकारी हुने निश्चित छन्, र हामीले पहिले नै प्रयास गरिसकेका छौं। के तपाइँ तिनीहरूलाई पनि प्रयास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
केहि दिन पहिले हामीले तपाइँलाई सबैको बारेमा बतायौं क्याम्पर भ्यान, तर अब हामीले पत्ता लगाएका छौं कि त्यहाँ धेरै छन् अनुभव मा शर्त गर्न चाहने जो प्रभावकारीहरु फरक छुट्टी बिताउन। र तपाइँलाई थाहा छैन उनीहरुको पा wheel्ग्रा पछाडि कती रमाइलो छ! Gotzon Mantuliz, Daniel Illescas, Susana Molina, Madame de Rosa, Jonan Wiergo ... उनीहरुलाई देखे पछि, तपाइँ उनीहरुलाई पनि प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ!
En The Indian Face हामी यो गर्मी को यात्रा प्रवृत्ति को ठूलो प्रशंसक हो: क्याम्पर भ्यान! हामी तपाइँलाई सबै कुरा बताउँछौं: जब आन्दोलन उठ्यो, क्याम्पर्स को प्रकार को हो, स्पेन को सबै भन्दा सिफारिश क्षेत्रहरु उनीहरु संग यात्रा गर्न को लागी र जो एक अग्रणी कम्पनीहरु उनीहरुलाई भाडामा छ।
सर्फ, स्केट र ... सर्फस्केट
जोसँग खेलकुदहरू सँगै ल्याउने विचार छ जुन स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो भावना उत्पन्न गर्दछ र सर्फस्केट,तिनीहरू कुनै श without्का बिना # फ्रिस्पिरिट छन्। हाम्रो लेखमा आज हामी तपाइँलाई इतिहास, यस खेलको विवरण बताउँदछौं, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी तपाइँलाई याद दिलाउँदछौं कि हाम्रो क्याप्स Born To Skate, Born to surf y Born to be Free तिनीहरू ती हुन् जुन यसलाई सर्वश्रेष्ठ परिभाषित गर्दछन्।
Gordy Ainsleigh: सवार देखि अल्ट्रा ट्रेल को निर्माता सम्म
के तपाइँ ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो विश्वास गर्नुहुन्छ कि सबै कुरा एक कारण को लागी हुन्छ? यस लेख पछि, तपाइँ थप यो विश्वास को पुष्टि हुनेछ। किनभने त्यहाँ समय मा अस्तित्व थियो, एक दौड सवार र उनीहरुको घोडाहरु को लागी बनाइयो, तर यो एक मानिस थियो जसले यसलाई जित्यो। के तपाइँ कसरी अल्ट्रा ट्रेल को जन्म भएको थियो को कहानी जान्न को लागी तैयार हुनुहुन्छ? यो पोस्ट नछुटाउनुहोस्।
सर्फिंग: ओलम्पिक खेल मा पहिलो पटक
त्यो सर्फिंग ओलम्पिक खेलहरु को हिस्सा हो कि गर्व संग हामीलाई भरिन्छ। यो खेल हो कि हावा र एड्रेनालाईन, स्वतन्त्रता र तंत्रिकाहरु को एक सनसनी पैदा गर्ने तरंगहरु संगै नाच्ने मात्र जब लहर को शिखर ले, हामीलाई हाम्रो संग्रह बनाउन को लागी प्रेरित फैलिने:साहसिक प्रेमीहरु को लागी बनाईएको। यदि तपाईं ओलम्पिकमा सर्फि of समावेशीकरणको बारेमा थप जान्न चाहानुहुन्छ भने, यस लेखलाई नहेर्नुहोस्।
द्वीपसमूह क्यानरी जस्तै Balearic तिनीहरू विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू प्रदान गर्न सक्षम छन् जस्तै विभिन्न भ्रमण र पर्वतारोहण ट्रेल्स जुन मा अन्त हुन्छ समुद्र तट, तर पहाडहरूमा पनि। यदि तपाईं प्रशंसक हुनुहुन्छ ट्रेकिंग पढिरहनुहोस् किनकि यहाँ हामी दुबै द्वीपसमूहमा पैदल यात्रा गर्नका लागि केहि उत्तम मार्गहरू बताउँछौं।
विज्ञहरूले सिफारिश गर्छन् कि तपाईको खुट्टा बालुवामा वर्षको एक पटक डुबाई दिनुहोस्, र तपाईंको आँखालाई समुद्रको नीलो रंगले प्रदान गर्ने विभिन्न शेडहरूमा हराउन दिनुहोस्। त्यसकारण हामी तपाईलाई brought ल्याएका छौं समुद्र तट, विश्वसँग सब भन्दा सुन्दर मानिन्छ र त्यसको छेउमा, हाम्रो हप्ताको सिफारिस, हाम्रो चश्मा: फ्रंटियर, फ्रिराइड y Polar काले। ताकि तपाईं यी प्याराडाइसेसको कुनै विवरणको दृष्टि गुमाउनु हुँदैन।
स्केटको जीवनमा देखा पर्‍यो ड्यानी लियोन संयोगवश, वा त्यसैले माड्रिलिनियन भन्छन्, जो स्पेनको सर्वश्रेष्ठ स्केटर्स मध्ये एक हो। खेलाडीले के गर्नलाई मोड्दै छ स्केट हाम्रो देशमा। Mctwist प्रदर्शन गर्न पहिलो मध्ये एक बन्ने, केही चालकले चाल खेल्न सक्षम भएको छ। के तपाईं स्पेनीको 'स्केटबोर्डि ofका राजा' को जीवन पत्ता लगाउन तयार हुनुहुन्छ?
"एक यात्रा असफलताको सम्भावना संग एक साहसिक छ"सर्फर, परोपकारी र साहसिक प्रेमी। केपा स्टीलभिज्कायाको मुण्डकामा सर्फिंग गर्दा एउटा गम्भीर दुर्घटनामा परेपछि उसको जीवन उसको आँखाको अगाडि बित्यो। त्यहाँबाट, उसको जीवनको दर्शन परिवर्तन भयो र कागजातमा उनको रुचि सर्फ जीवनको दर्शन कसरी ठूलो भयो। ऊ उत्तम छालहरूको खोजीमा संसारको यात्रा गरिरहेको छ, तर सम्भवतः उही ती व्यक्तिहरू हुन् जसले उसलाई फेला पारे। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ हामी को बारे को कुरा गर्दैछौं?
१० चीजहरू जुन तपाईं सायद योना लोमुको बारेमा जान्नुहुन्न थियो
को सबै भन्दा राम्रो खेलाडी रग्बी कथा बाट: जोना लोमु, किंवदन्ती कि रग्बी व्यावसायिकता को लागी र न्यूजील्याण्ड को तर्फबाट उठाइयो। त्यहाँ जो त्यहाँ छन् जसले योनाको भिडियोहरू खेलको मैदानमा हेर्दै छन् भनेर बुझ्न पर्याप्त छन् कि यो एथलीट अर्को संसारबाट आएका थिए, १०० किलो भन्दा बढी मांसपेशी र मैदानमा अचम्मको वेग, यसका केही गुणहरू हुन्। माउरी मूलबाट खेलाडी। के तपाईंले उसलाई चिन्नुभएको छ?
१० चीजहरू जुन तपाईलाई vlvaro Bultó बारे थाहा थिएन: चरम जीवनको लागि
चरा मानिस गर्नको लागि Vlvaro Bultó जीवन एक दैनिक आधारमा सीमा पार गर्ने र चरम अनुभवहरू बाँच्नको बारेमा थियो, जुन उनको आदर्श वाक्य थियो। उनलाई सेलिब्रेटी हुन धेरै समय लागेन जब विश्वले यस कातालानको कारवाही देख्न थाल्छ, ती मध्ये उनका प्रसिद्ध चुनौति पखेटा विडम्बनाको कुरा, ती मध्ये एक उनको जीवनको लागि खर्च भयो। यहाँ हामी उसका केही साहसिक कार्यहरूको समीक्षा गर्दछौं, के तपाईंले यसलाई हराउनु भएको छ?
केली स्लेटरको बारेमा १० चीजहरू जुन तपाईलाइ थाहा थिएन
'स्लेट्स' वा 'स्लेटर' यो कसरी विश्व सर्फि champion च्याम्पियनलाई सामान्य रूपमा चिनिन्छ: केली स्लेटर। निस्सन्देह, तरंगहरूका राजाको रूपमा स्थापित, त्यहाँ कोही थिएन जसले यस फ्लोरिडा पौराणिक कथाको प्रतिभाको बराबरी गरे। को प्रेमीहरु को लागी सर्फ, स्लेटरले यस खेलको अगाडि र पछाडि चिन्ह लगाईयो, जुन उनको अनुसार; हामी सबै महत्त्वपूर्ण चीज भित्र सर्फिंगको भावना बोक्छौं यसलाई जगाउने। एक प्रामाणिक free spirit, तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
१० चीजहरू जुन तपाईलाई साइकल चालक एड्डी मर्चक्सको बारेमा थाहा थिएन: 'द क्यानिबल'
कसै-कसैले उहाँलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ साइकल चालकको रूपमा चिन्छन्, अरूले उसलाई "नरभक्षी" भनेर चिन्न रुचाउँथे। सत्य यो हो एडी मर्चक्स एक थियो जब यो प्रतिस्पर्धा र जम्मा जीतहरु को लागी insatable तिर्खा। विशेषता जुन उसलाई एक भन्दा बढी अवसरमा पोडियममा लग्यो। यो बेल्जियमको साइकल चालक को इतिहास मा एक माइलस्टोन मार्कका लागि प्रसिद्ध छ साइक्लि।भावी सवारहरूको भावी पुस्ताहरूका लागि उनले आफ्नो बिरोधमा धेरै उच्च बार राखेका छन्। हामी तपाईंलाई बताउछौं?
१० चीजहरू जुन तपाईं एलेक्स होनल्डको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छः पर्वतारोही जो मृत्युको डरबाट डराउँदैन।
डर बिना मानिस? यो तपाईले सुन्नुहुने सब भन्दा साधारण कुरा हो एलेक्स होन्नल्ड जब अन्तर्वार्ता। र यो यो को प्रतिभा र साहसी छ क्लम्बर शैली 'निःशुल्क त्यागी' ले उसलाई असम्भव प्रदर्शन गर्न उन्मुख गरेको छ: कुनै सुरक्षा बिना or ०० मिटर चढाईको कल्पना गर्नुहोस् वा डोरीहरूबाट मद्दत नगर्नुहोस्, केवल चट्टान, तपाईंको हात र खुट्टा। पढ्नुहोस् यदि तपाईं यस कथाको विवरण जान्न चाहनुहुन्छ भने।
१० चीजहरू तपाईंले सेभेरियानो ब्यालेस्टेरोसको बारेमा जान्नुपर्दछ; एक गल्फ पौराणिक कथा
57 360 शीर्षक संकलित भयो, र झन्डै ºº० को एक स्वि जुन उनी आफ्नो सन्तुलन गुमाए जस्तो देखिन्थ्यो, गंभीर Ballesteros गोल्फको इतिहासमा विश्वका आँखाहरूमा एक लिजेन्ड हो। उसको मौलिकता र लगनशीलताले उनीलाई एक मुख्य सन्दर्भ बनायो गल्फ विश्वव्यापी। हामी तपाईंलाई यो गोल्फरको जिज्ञासा र उसको अचानक खेल पतन बताउँछौं।
१० चीजहरू जुन तपाइँ लिन्डसे भोनको बारेमा थाहा पाउनुपर्दछ: उत्तम अल्पाइन स्कायर।
"रेकर्डको बारेमा जति धेरै व्यक्तिहरू बोल्छन्, उनीहरूलाई भत्काउन गाह्रो हुन्छ" र यदि विश्वमा सबै भन्दा राम्रो अल्पाइन स्काइयरले त्यसो भन्यो, हामी उनलाई विश्वास गर्छौं। Lindsey वोन आफूलाई सबैभन्दा राम्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा स्थापित गरेको छ स्की संसारको अल्पाइन। ध्यान केन्द्रित गर्नु र प्रभावी हुँदा स्कीइ two दुई गुणहरू हुन् जसले उसलाई प्रतिस्पर्धामा चित्रित गर्दछ, त्यसैले स्कोर, जीत र रेकर्डहरू आफैंबाट आउँदछन्।
विन्डसर्फि and र अल्ट्रा ट्रेल: दुई बिभिन्न खेलहरू, उही सनसनी
प्रत्येक खेलकुदको एक मोड्यालिटी हुन्छ जुन एथलीटको उत्सुकता पछि उनीहरूको सीमा भन्दा टाढा जानको लागि उत्पन्न भएको थियो। यस अवस्थामा, Windsurf जुन सर्फिंग गर्दा र अधिक स्वतन्त्रताको चाहनाबाट जन्मेको थियो अल्ट्रा ट्रेल कुनै न कुनै इलाकामा लामो दूरीको दौडबाट। दुबै खेलकुदहरू, उनीहरू अभ्यास गरिएको वातावरण भन्दा फरक छन्, केहि साझा साझा गर्नुहोस् जुन हामीलाई प्रेरणा दिन्छ र पहिचान गर्दछ। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
123 ... 21 अर्को